Ch 2 Luke – 2kalluunka
Home / Kitaabka Quduuska ah / Injiilka Luukos / Ch 2 Luke
2:1 Oo waxaa dhacday in waayahaas in amar ka soo baxay Kaysar Awgustus, si dunida oo dhan la qoro lahaa.
2:2 Tani waxa ay ahayd diiwaan gelinta ugu horeysay; waxaa la sameeyey by taliyihii Suuriya, Kuranayos.
2:3 U wada tageen in la sheegay, oo mid kasta oo magaaladiisii.
2:4 Markaasaa Yuusuf ayaa sidoo kale kor u yimid Galili, ka magaaladii Naasared, oo wuxuu aaday Yahuudiya, in magaaladii Daa'uud, oo Beytlaxam la odhan jiray, maxaa yeelay, wuxuu ahaa dadkii iyo dhashii Daa'uud,
2:5 si ay u la sheegay, isagoo ahayd tii u doonanayd Mary, kuwaas oo la ilmaha ahaa.
2:6 Markaasaa waxaa dhacday in, kolkay halkaas joogeen, maalmaha dhammaadeen, si ay siin lahaa dhalashada.
2:7 Oo waxay umushay wiilkeedii curadka ahaa. Oo iyana waxay isagii ku duudduubtay oo duudduubo isaga iyo qabaal ku jiifisay, maxaa yeelay, ma jirin qolka iyaga ugu ayay hudheelkii ka.
2:8 Oo waxaa jiray adhijirro bannaanka jooga oo la mid ah, oo taxadar iyo dhawri in habeenkii idahooda ka badan.
2:9 Oo bal eeg, Angel Rabbiga waxay istaageen meel hortooda dhow, iyo dhalaalka Ilaah iftiimisay hareerahooda, oo iyagii waa la laayay iyadoo ay cabsi weyn.
2:10 Markaasaa malaa'igtii ku yidhi iyagii: "Ha ka baqin. Wixii, bal eeg, Aan idinku wacdiyey farxad weyn, taas oo u ahaan dadka oo dhan.
2:11 Waayo, maanta Badbaadiye ayaa kuu dhashay, waayo, magaaladii Daa'uud: inuu yahay Masiixa Rabbiga ah.
2:12 Oo intanuna waxay ahaan doontaa calaamo idiin ahaan: waxaad ka heli doontaa ilmaha ku duudduubtay oo duudduubo oo ku jiifa qabaal. "
2:13 Dhaqsoba waxaa malaa'igtii la jirtay ka mid ah ciidanka samadu, Wayna ammaanayeen Ilaah oo leh,
2:14 "Ilaah ha ku ammaanmo meelaha ugu sarreeya, dhulkana nabad ha ahaato niman wanaagsan. "
2:15 Oo waxaa dhacday in, markii Malaa'igta ayaa iyagii ka tegey oo wuxuu galay samada, adhijirradii isku yidhaahdeen, "Aynu gudbo Beytlaxam oo arag eraygan, kaas oo dhacay, oo Rabbiga ayaa shaaca ka qaaday noo. "
2:16 Dhaqsoba waxay tageen. Oo iyana waxay heleen Maryan iyo Yuusufba; iyo dhallaanka waxaa ku jiifa qabaal.
2:17 Markaasuu, dul arkay, ay garanayn hadal wixii lagu iyaga kula hadlay oo ku saabsan wiil this.
2:18 Oo yaa maqlay oo dhan ayaa la yaabay by this, iyo waxyaalihii sheegay in adhijirradu.
2:19 Laakiin Mary erayadan oo dhan u dhawray, iyaga oo qalbigeeda kaga fikirtay.
2:20 Adhijirraduna way noqdeen, Ilaah ku ammaanaya oo ku weynaynaya waxyaalihii ay maqleen oo ay arkeen oo dhan, sidii iyaga loogu sheegay in.
2:21 Oo siddeed maalmood dhammaadeen, si wiilka la gudo lahaa, magiciisiina waxaa loo bixiyey CIISE, kaliya sidii uu u dhawaaqay by Angel waxaa ka hor inta uu uurka lagu uuraysan ah.
2:22 Oo markii waagii ay nadiifiskeeda u dhammaadeen, siduu ahaa sharcigii Muuse oo ahaa, waxay isagii keeneen Yeruusaalem, si ay isaga inay Rabbiga u dhiibaan,
2:23 sida ay ugu qoran tahay sharciga Rabbiga, "Waayo, furitaanka uurka ku kasta oo lab ah waxaa loogu yeedhi doonaa quduus xagga Rabbiga,"
2:24 iyo si ay u bixiyaan allabarigii, siday ugu qoran tahay sharciga Rabbiga, "Labo ka mid ah qoolley ama laba xamaam oo yaryar."
2:25 Oo bal eeg, waxaa jiray nin Yeruusaalem, magiciisa la odhan jiray Simecoon, iyo ninkan kaliya ahaa oo Ilaah ka cabsada-, wuxuuna sugayay gargaaridda Israa'iil ah. Markaasaa Ruuxa Quduuska ah waxaa isaga la jiray.
2:26 Oo isna wuxuu jawaab ka Ruuxa Quduuska ah helay: waxba ma uu arki doono dhimashadiisa ka hor inta uusan arkin Rabbiga Masiixiisa.
2:27 Oo intuu tegey ayuu la Ruuxa inuu macbudka. Oo yarkii markuu Ciise waxaa loo keenay in waalidkiis, si ay u dhaqmaan on magiciisa ku hadlaya sidii caadadii sharciga,
2:28 waxa uu sidoo kale kor u qaaday, gacmihiisa ku qaaday, oo Ilaah ayuu u duceeyey, oo wuxuu yidhi:
2:29 "Hadda waxaa laga yaabaa inaad ka qaadista anoo addoonkaaga ah nabad, Rabbiyow, si waafaqsan hadalkaaga,.
2:30 Waayo, indhahaygu waxay arkeen badbaadintaada,
2:31 wixii aad diyaarsatayna wejiga dadka oo dhan hortiis:
2:32 iftiinka muujinta in quruumihii iyo ammaanta dadkaaga Israa'iil aad. "
2:33 Markaasaa aabbihiis iyo hooyadiis ka yaabeen waxyaalahaas ka badan, kaas oo lagaga hadlay isaga ku saabsan.
2:34 Simecoon ayaa iyaga u duceeyey, oo wuxuu hooyadiis Maryan ku yidhi: "Bal eeg, this mid ka mid ah ayaa la dhigay dumiddii iyo sarakicidda kuwa badan oo Israa'iil, iyo sida calaamad oo la burinaya doonaa.
2:35 Oo seef dhex naftaada idlaan doonaan, si ay qalbiyo badan fikirradoodu u muuqan doonaan. "
2:36 Waxaa jirtay nebiyad a, Anna, gabadh ina Fanuu'eel, ka qabiilkii reer Aasheerna. Waxay ahayd mid aad u siyaadinay sano, oo waxay iyada iyo ninkeeda ku noolaa intii toddoba sannadood bikradnimadeeda.
2:37 Oo markaas iyaduna waxay ahayd carmal, xataa in ay iyada sano iyo siddeetan afaraad. Oo aan macbudka ka fogaadaan, oo iyana waxay ahayd addoon soon iyo tukasho, habeen iyo maalinba.
2:38 Oo galaya garoonka, isla saacaddiiba, ayay qirteen inay Rabbiga. Oo iyana waxay isagii kula hadleen oo ku saabsan in kuwaasoo sugaya furashada Israa'iil oo dhan.
2:39 Oo ka dib markii ay wax walba dhammeeyeen sida sharciga Rabbiga, waxay ku noqdeen Galili, ilaa magaaladoodii, Naasared.
2:40 Haddaba Wiilkii ayaa koray, oo wuxuu u xoogaystay buuxnaantiisa oo ku saabsan xigmadda. Oo nimcada Ilaah ku jirto.
2:41 Oo waalidkiisii ​​waxay sanad kasta Yeruusaalem, waqtiga iid Kormaridda.
2:42 Oo markuu noqday laba iyo toban sannadood, waxay kor uguma Yeruusaalem, sida caadadii maalinta iidda.
2:43 Oo goortay maalmihii dhameystirtay, markay kuu soo noqdeen, Ayaa Ciise wiilkii ahaa ku hadhay Yeruusaalem. Waalidkiisii ​​ma ogayn.
2:44 Laakiin, iyagoo u malaynaya inuu in shirkadda, socdo, ayay maalin sii socdeen, isaga oo doonaya ka dhex doondooneen xigaalkooda iyo kuway isbarteen.
2:45 Oo isaga ma helo, ayay ku noqdeen Yeruusaalem, isaga oo doonaya.
2:46 Oo waxaa dhacday in, saddex maalmood dabadeed,, inay macbudka ka heleen isagoo, dhex fadhiya dhakhaatiir ah, dhegaysanaya oo wax weydiinaya.
2:47 Laakiinse bal yaa isagii way maqleen dhan ayaa la yaabay uu miyir iyo jawaabaha uu.
2:48 Oo markay isaga arkeen aad, waxay la yaabeen. Oo hooyadiis baa ku tidhi: "Wiilka, sababta aad u dhaqmeen sidan inoogu qabo xagga? Bal eeg, aniga iyo aabbahaa ayaa aad doonaya in murug. "
2:49 Oo isna wuxuu ku yidhi iyagii: "Sidee in aad ii doondoonayseen waa? Waayo, ma aad ogtahay in ay tahay lagama maarmaan u ah ii ahaan in waxyaalahan oo waa Aabbahay?"
2:50 Oo ma ay garan hadalkii uu kula hadlay iyaga.
2:51 Oo isna wuxuu ku soo degay iyaga oo ka tegey oo Naasared. Oo isna wuxuu ahaa tooska iyaga. Oo hooyadiis erayadan oo dhan qalbigeeda ayay ku haysatay.Ciisena.
2:52 Ciisena wuxuu ku xigmadda, iyo in da'da, iyo nimcada, Ilaah iyo dadka.